Etihad Airways: voatendry ho mpitantana firenena vaovao ho an'i Sudan
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Etihad Airways: voatendry ho mpitantana firenena vaovao ho an'i Sudan
Ny Etihad Airways, ny kaompaniam-pirenen'i Emirà Arabo Mitambatra (Emira Arabo Mitambatra), dia nanambara ny fanendrena an'i Ali Ghanim Hadi ho mpitantana ny firenena vaovao ho an'i Sudan.
Miorina ao amin'ny biraon'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Khartoum, Andriamatoa Hadi dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny asa ara-barotra ataon'ny Etihad Airways any Sudan, iray amin'ireo tsena efa ela niorenan'ilay zotram-piaramanidina.
Nandritra ny efa-taona niainany nandritra ny efa-taona teo amin'ny seranam-piaramanidina, dia nifandray tsara tamin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any amin'ny Helodrano izy ary lavitra kokoa.
Nifindra avy tany amin'ny biraon'ny foibe any Abu Dhabi izy izay niasa amin'ny maha Sales Manager tompon'andraikitra amin'ny fitantanana portfolio-kaonty mifangaro ho an'ny governemanta eo an-toerana sy ny federaly.
Daniel Barranger, filoha lefitry ny Global Sales an'ny Etihad Airways, dia nilaza fa “Faly izahay manana an'i Ali hitarika ny ekipa ao amin'ny biraon'ny Khartoum, izay hanohizany hitarika fahombiazana ara-barotra any Sudan, iray amin'ireo tsena taloha indrindra ao amin'ny Etihad Airways.
“Ny fanentanan'i Ali dia ny fanekena ny asa mafy nataony sy ny fanoloran-tenan'i Etihad Airways hampivelatra sy hikolokolo ny talenta Emirati handray andraikitra amin'ny maha-mpitarika azy ao Abu Dhabi sy any ampitan-dranomasina.”
Etihad Airways, izay nanomboka nanidina nankany Sudan tamin'ny 2006, dia miasa sidina efatra isan-kerinandro eo anelanelan'ny Abu Dhabi sy Khartoum. Ny serivisy dia manome fifandraisana amin'ireo mpandeha eo anelanelan'ny Sodana sy ny Emirà Arabo Mitambatra, miaraka amin'ny fidirana amin'ny toerana manan-danja manerana ny tambajotram-pirenen'i Etihad Airways ao amin'ny zanatany Indiana, Azia, Eropa ary Amerika Avaratra.
Fandaharam-panofanana Seychelles Smart Certification voalohany natomboka tany Reunion
africaextreme.travel misafidy tranokala misy kalitao